Tirtir podcasts-ka la soo dejiyay si aad u xorayso booska kaydinta ee iPhone | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Tirtir podcast-yada la soo dejiyay si aad u xorayso booska kaydinta ee iPhone
Tirtir podcast-yada la soo dejiyay si aad u xorayso booska kaydinta ee iPhone
Inta badan dhegeystayaasha podcast-ka, waxa jira wakhti aad haysatid bandhigyo badan oo aan la ciyaarin, oo meel aad u badan ka qaadanaya iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Nasiib wanaag, tani waa dhibaato la hagaajin fudud.
Soo celi meel kaydinta qaaliga ah adigoo tirtiraya qaybaha aadan u baahnayn inaad ku kaydsato gudaha, kana ilaali abka Podcasts inuu kaydiyo macluumaadka mustaqbalka. Waan ku tusi doonaa sida.
Haddii aad ku raaxaysato podcast wanaagsan sida CultCast (shameless plug) waa madadaalo joogto ah adiga, waxa ay u badantahay in aad iska diiwaan galiso bandhigyo badan oo kala duwan kuwaaso todobaad kasta usoo diraya qaybo cusub qalabkaaga.
Sida caadiga ah, qaybahan waa la soo dejin doonaa si ay ugu raaxaystaan ​​wakhti kasta, meel kasta - iyada oo leh ama la'aanteed xogta. Lagama saari doono qalabkaaga ilaa aad si buuxda u dhagaysato.
Soo celi kaydinta uu xaday Podcasts
Waqti ka dib, podcasts-yadaas ayaa kor u kacaya. Waxay noqon kartaa dhibaato dhab ah kuwa si joogto ah u dagaalamaya si loo hubiyo inay haystaan ​​​​ugu yaraan qaar ka mid ah meel banaan oo lagu kaydiyo sawiro iyo fiidyowyo cusub, laguna soo dejiyo abka cusub.
Haddii podcast-yada aan la ciyaarin ay meel aad u badan ka qaadanayaan iPhone-kaaga ama iPad-kaaga, waxa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad gacanta ka saari lahayd qaarkood. Waxa laga yaabaa in aad rabto in aad gabi ahaanba joojiso soo dejinta dhacdooyinka tooska ah.
Tilmaamahan waxtarka leh, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo labadaba waqti yar gudahood.
Sida loo tirtiro podcasts aan la ciyaarin
Waxaa jira laba siyaabood oo aad iPhone ama iPad-kaaga uga tirtiri karto podcasts-ka aan la ciyaarin. Waxaad si gaar ah u tirtiri kartaa qaybaha aan la ciyaarin, ama waxaad nadiifin kartaa dhammaan bandhigyada aanad mar dambe qorshaynayn inaad dhegaysato.
Labada habba waxay gaadhaan natiijooyin isku mid ah, in kasta oo meesha laga saaro bandhigyada oo dhan waxay caadi ahaan xoreynayaan kaydin badan, labaduba waa kuwo aad u fudud. Dooro midka adiga ku shaqaynaya:
Habka 1: Tirtirka dhacdooyinka gaarka ah
Fur fur Podcasts app.
Taabo Maktabadda tab, ka dibna taabo Dhacdooyinka la soo dejiyay.
Guji liiska oo ku dhufo bidix qayb kasta oo aanad rabin inaad sii haysato, ka dibna taabo saar.
Bidix u dhufo, ka dibna taabo Ka saar.
Habka 2: Tirtir dhammaan bandhigyada
Taabo Maktabadda tab.
Guji liiska oo dooro bandhig kasta oo aadan rabin inaad sii haysato.
Taabo fursadaha (...) badhanka, ka dib taabo Ka Tirtir Maktabada.
Dhammaan qaybaha, waxay tageen isla markiiba
Haddii aad rabto inaad ka ilaaliso Podcasts inay soo dejiso qaybo cusub oo bandhigyadan ah mustaqbalka, waxaad sidoo kale u baahan doontaa Unsubscribe.
Sida loo xannibo soo dejinta Podcasts-ka tooska ah
Hadda oo maktabadaada Podcasts ay u muuqato mid nadiif ah, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad qaado tillaabooyin si aad u hubiso in xaaladdan oo kale aysan mar kale soo kicin. Habka ugu dhaqsaha badan oo fudud ee taas loo sameeyo waa in la xannibo soo dejinta tooska ah.
Tani waxay ka hortagtaa Podcasts inay badbaadiyaan qaybaha cusub ee bandhigyada aad ku biirtay. Taa baddalkeeda, waxaad sii dayn kartaa qaybahaas mar kasta oo aad rabto inaad dhegaysato, ama gacanta ku soo dejiso si aad ugu raaxaysato offline.
Mar labaad, waxaa jira laba hab oo tan. Mid waa in la joojiyo dhammaan soo dejinta dhammaan bandhigyada; Midda kale waa in la joojiyo soo-dejinta bandhigyada gaarka ah.
Habka 1: Jooji dhammaan soo dejinta Podcasts
Fur fur Settings app.
tubada Soo deji Qaybaha.
Waxaad gabi ahaanba joojin kartaa soo dejinta Podcasts-ka tooska ah.
Habka 2: Dami soodejisyada bandhigyada gaarka ah
Guji liiska oo dooro bandhig kasta oo aadan rabin inaad si toos ah uga hesho qaybo cusub.
Taabo fursadaha (...) badhanka, ka dib taabo Custom Settings.
Dooro Soo deji Qaybaha, ka dibna dooro Off.
Dami soo dejinta bandhigyada gaarka ah.
Haddii aad qorsheyneyso inaad sii wadato soo dejinta qaar ka mid ah bandhigyada, waa fikrad wanaagsan inaad hubiso in Podcasts ay si toos ah uga saarayso qaybaha la soo dejiyay ka dib marka la dhageysto, iyo inaad leedahay xaddidid meesha.
Sida loo maareeyo soo dejinta Podcasts
Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hubiso inaadan ku dhammaanin buug-gacmeedyo badan oo la soo degsaday oo qaadanaya meel kaydinta qaali ah mustaqbalka.
Si otomaatig ah u tirtir podcast-yada la ciyaaray
Hubi Tirtir Qeybaha La Ciyaaray waa karti.
Habka ugu fudud ee looga hortagi karo Podcasts inay qaataan meel aad u badan.
Xaddid soo dejinta dhacdo
Dooro bandhiga aad rabto inaad xaddiddo.
Taabo fursadaha (...) badhanka, ka dib taabo Settings.
Dooro Custom Settings, ka dib dhagsii Xakamaynta Dhacdooyinka.
Dooro xad adiga kuu shaqaynaya
Xaddid soo dejinta si sahlan oo loo dayactiro Podcasts.
Haddii aad iska diiwaan geliso tiro wanaagsan oo podcasts oo aad rabto in aad ogolaato soo dejinta dhacdooyinka, waxa laga yaabaa inaad ogaato in ilaalinta maktabadaada iyo ilaalinta wax kasta oo hubin ay noqoto hawl caadi ah.
Laakin haddii aad fuliso qaar ka mid ah tallaabooyinka badbaadinta meel sare ee lagu faahfaahiyay, dayactirka gacanku waa inuu ahaado mid dhakhso badan oo aad u yar.
Sida qaab ahaan loogu soo laabto ka dib xidhitaanka Apple Watch
Qorshaha Shaacinta Xayeysiiska Google ma qabsan doonaa?